Chlorine Dioxide, Nbr Latex, Barium Carbonate, Strontium Carbonate - FIZA
Moto Miedzo Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Moto Miedzo Cupel
Chlorine Dioxide Hwendefa
Chlorine Dioxide Imwe Chinhu Chine Powder
Chlorine Dioxide Maviri Ezvinhu Kits
Chlorine Dioxide Sachet 20G (Yakawedzerwa-kuburitswa)
Chlorine Dioxide Sachets 20G (Kurumidza-kuburitsa)
Chlorine Dioxide Mhepo Sanitizer
Kambani yedu yakavambwa muna 2005 uye dzimbahwe riri mu shijiazhuang inova nzvimbo inoyevedza yeChina. Bhizimusi hombe rinosanganisira kugadzirwa nekutengesa kwemakemikari emakemikari uye moto wekuedza zvinoshandiswa ne-zvigadzirwa, pamwe nekutengesa kunze kweklorini dioxide tekinoroji. Kambani yedu, yakanangana nekushanda kwakadzikama uye kusimudzira kwakasimba, inogara ichimanikidza kutenda yakanangana nekuvaka kambani yakanaka brand uye kuhwina musika uye vatengi vane mhando yakanaka yechigadzirwa uye isina kuchengetedzwa sevhisi.
Kutendeseka ndiyo nheyo
Iyo kambani inogara inonamatira kunheyo yekutenda kwakanaka
Kunda musika uye vatengi vane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Wana kuvimba kwako uye rutsigiro nebasa redu repachokwadi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro
032020 / Zvita
Mhedzisiro yecovid-19 hutachiona paNBR latex
NBR latex inoratidza yakanakisa zvivakwa sekushora mafuta nemamwe makemikari izvo zvinoita kuti zvive zvinodikanwa kwazvo mukugadzira michina yekudzivirira kunyanya magurovhosi eindasitiri & yehutano chikamu. Uku kukura kuri kukura kunofungidzirwa kuumba mikana yakawanda mu nit ...
Nhanganyaya kune chlorine dioxide
Chlorine dioxide (ClO2) iri yero-girini girini ine hwema hwakafanana neklorini ine yakanakisa kugovera, kupinza uye kugona kubereka nekuda kweiyo yayo gaseous hunhu. Kunyangwe iyo chlorine dioxide ine chlorine muzita rayo, zvivakwa zvacho zvakasiyana zvakanyanya, zvakanyanya senge kabhoni dhayokisaidhi ...
Welcome to FIZA TECHNOLOGY
HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD inogadzira makemikari zvizere uye mutengesi. Isu tinogadzira mukugadzira uye kutumira kunze kwemakemikari ayo anoshandiswa akasiyana siyana mafomu mune chikafu, fetiraiza, chikafu, maindasitiri uye ekurapa mvura minda, senge sodium chlorite, chlorine d ...
Kambani yedu yakavambwa muna 2005 uye dzimbahwe riri mu shijiazhuang inova nzvimbo inoyevedza yeChina. Bhizimusi hombe rinosanganisira kugadzirwa nekutengesa kwemakemikari emakemikari uye moto wekuedza zvinoshandiswa ne-zvigadzirwa, pamwe nekutengesa kunze kweklorini dioxide tekinoroji ……
Zhongyuan Kuvaka No.368 Youyi North Street Shijiazhuang China